Mpanompo tsy voafetra ho an'ny Google | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 22, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Hafahafa ny indostrian'ny Internet. Raha mamolavola sy mitahiry ny rakipahalalana lehibe indrindra manerantany ianao noho ny asa an-tsitrapo dia hita fa mahery fo ianao. Raha mandefa fanasana maimaimpoana ho an'ny olona ianao hizaha toetra sy hamaly ny rindrambaiko beta, dia tsy mahery fo fotsiny ianao… mahafinaritra anao koa Na izany aza, raha mandoa denaria iray amin'ny dolara ianao mba hiasa dia manararaotra sy manararaotra azy ianao. Hafahafa ihany izany fomba fiasa izany… tsy maninona fa maimaim-poana, tsy mora izany.
Google dia mahay manararaotra amin'ny fampiasana maimaimpoana. Manararaotra antsika isan'andro izy ireo ary mifandimby, mampiasa ny serivisy sy ny rindrambaiko ataon'izy ireo izahay. Mpanompon'izy ireo tsy voafehy izahay.
Manoratra atiny sarobidy izahay ary mamoaka izany amin'ny Internet, mamela an'i Google hanompo azy amin'ny valin'ny karoka, miaraka amin'ny dokambarotra apetraka amin'ny mpifaninana aminay. Tongasoa anao, Google!
Mampiditra rohy ao amin'ny atiny izahay, mamela an'i Google hamaritra ny laharan'ny pejy amin'ireo valim-pikarohana ireo; noho izany, fampitomboana ny sandan'ny fikarohana… ary fampitomboana ny fifaninanana tolo-kevitr'ireo dokam-barotra karama isaky ny tsindry ireo. Tongasoa anao, Google!
Manoratra atiny lehibe ho an'i Google amin'ny rafitra Wiki misy azy izahay (Knol). Nanangona pejy fahalalana 1 tapitrisa mahery izy ireo hizarana… ary mametraka doka. Tongasoa anao, Google!
Manoratra antontan-taratasy fanohanana tsy mampino ao amin'ny seha-pifanakalozan-kevitra ataon'izy ireo izahay. Tsy maintsy mamonjy ny ekipan'izy ireo mandritra ny ora an'arivony ao amin'ny antontan-taratasy ara-teknika sy ny fanohanan'ny mpanjifa izany. Tongasoa anao, Google!
Izahay dia mizaha ny lozisin'izy ireo ary manome angon-drakitra tamberina sy fampiasana azo ampiasaina maimaim-poana amin'ny vokatra beta tsirairay avy… mamonjy azy ireo am-polony tapitrisa amin'ny fanandramana sy fanohanana. Tongasoa anao, Google!
Ampianay amin'ny Google Shopping ny vokatray sy ny entanay ka miseho valiny ireo… ary manome ampaham-bidy an'i Google izahay… na mahazo vola amin'ny doka misy karama ho an'ireo mpifaninana aminay. Tongasoa anao, Google!
Mampiasa ny tranokalanay sy ny serivisin'izy ireo izahay, mampiditra ny angon-drakitra manokanay, mombamomba ny fizahana ary mividy tantaran'izy ireo hahafahan'izy ireo mikendry anay sy mivarotra doka sarobidy kokoa. Tongasoa anao, Google!
Aza diso hevitra aho… Miaraka amin'ny dia an-tongotra toy ny olon-drehetra ihany aho. Mampiasa ny Google Apps ny orinasanay ary miasa tsara ireo fampiharana. Saika ampiasako ny Google rehetra, ao anatin'izany ny findaiko Android… ary tiako daholo izy rehetra. Manoratra an'ity lahatsoratra ity ao amin'ny Google Chrome aho .. tena mety izany. Tiako aza ny Google+. Manoratra momba ny vokatra sy serivisy Google ato amin'ny Martech foana aho!
Nihomehy imbetsaka momba ny Google ihany koa aho. Na teo aza izany rehetra izany, tsy nieritreritra ny hiala amin'ny Google aho. Ny fahaizan'i Google misarika ny mpihaino azy amin'ny alàlan'ny fanolorana azy ireo maimaim-poana mahatalanjona ny zavatra. Mangataka ara-bakiteny ny olona hiditra am-baravarana (toy ny maro tamintsika nanao rehefa nandefa Google+).
Mety hiady hevitra ianao fa an-tsitrapo izany rehetra izany.
Moa ve izany?
Efa nanandrana namaky iray andro tamin'ny Internet ve ianao nefa tsy tafiditra ao amin'ny Google? Azoko antoka fa tsy ho vita mihitsy io!
Manaraka ny lisitra ho an'ny Google masters? Asehoy ny fizahana dokam-barotra. Marina izany… Tian'i Google ianao hanampy amin'ny fanaovana doka kokoa amin'ny alàlan'ny fikitihana ny bokotra Google +1 amin'ny doka. Tsy mamorona an'ity aho.
Ny dokam-barotra an-tsehatra dia malaza eo ambanin'ny lisitra… ary mbola ratsy kokoa aza ny valiny. Fa raha afaka mangataka fanampiana aminao i Google amin'ny fanatsarana ny fomba fametrahana ny dokam-barotra an-tsehatra ary koa ny fitsapana ny maha-mety sy ny kalitaon'ny doka… dia afaka manatsara ny valiny izy ireo ary mahazo vola bebe kokoa. Inona no andrasanao amin'ny mpanompo? Mandehana miasa!
Tongasoa anao, Google!
Tsy mandoa vola ho an'ny mpanolo-tsaina media sosialy ianao